Banyere Anyị - Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd.
Hangzhou Qianrong akpaaka Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke ultrasonic nnyocha, elu ike ultrasonic transducer mmepe na mmepụta ke China. Ngwaahịa anyị bụ transducer, ike ultrasonic, ultrasonic metal welder, ultrasonic waya antenna akụkụ na na. A na-eji ihe ndị a eme ihe n'ọtụtụ ebe, dị ka ịgbado ọkụ plastik, ịgbado ọkụ igwe, mkpuchi na-enweghị isi na ịkpụ na ihe ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ Qianrong Equipment, ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na mkpa ndị ahịa. Mgbe anyị na-agagharị n’ahịa ụlọ dị na China, anyị na-egosipụtakwa teknụzụ nke ụlọ ọrụ anyị na ụwa. A maara nke ọma na arụmọrụ ya na ụlọ ọrụ ahụ.
Hergbaso "na-elekwasị anya na ngwa ultrasonic, na ezi okwukwe iji merie ndị ahịa, iji merie aha nke ịdị mma" nzube ebumnuche, na-aghọ ndị na-eduga ngwaahịa ụwa kachasị mkpa nke ultrasonic, site na ọkwa ọkachamara anyị na mbọ na-enweghị atụ, ngwaahịa dị mma maka ndị ahịa na mmepe nke ụlọ ọrụ iji mepụta nloghachi ka ukwuu.
Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd. na-etinye aka na azụmahịa mbupụ nke ultrasonic transducers na ultrasonic ịgbado ọkụ Machine n'ụwa nile na ihe karịrị mba 40.
Dika onye na-ebuputa ndi ozo nke ndi ozo nke ultrasonic, Qsonic nwere otutu ihe omumu na ihe omuma di omimi, ya mere anyi ji obi ike na anyi nwere ike izute ihe gi choro. N'otu oge, ngwaahịa anyị nwere ezi uche na ọnụahịa na ogo dị elu, ka ndị ahịa anyị wee nwee ike ị nweta uru asọmpi.
Na mmepe nke ụlọ ọrụ, anyị nwere ihe magburu onwe otu. Anyị na-enye ọ bụghị naanị ngwaahịa dị iche iche, kamakwa ihe ndị a na-eme na omenala dabere na eserese zuru ezu ma ọ bụ ihe atụ.
QRsonic na-enye ọtụtụ ndị ahịa OEM ndị ahịa ya. Ahịa nke ndị ahịa nwere ike e biri ebi na ultrasonic transducer na ultrasonic akụrụngwa.
Anyị ji obi anyị niile na-atụ anya ohere iji jeere gị ozi ma bụrụ onye gị na ya ga-eme n'ọdịnihu dị nso. Ka anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ ike ukwuu uru-maka-uru alaghachi na mmepe nke ụlọ ọrụ na àgwà ngwaahịa.